किड्नी खराब हुनभन्दा पहिला शरीरले दिन्छ यी ३ संकेत, वेवास्ता नगर्नुहोस! सेयर गरेर जानकारी गरौ
बुधबार, साउन १३, २०७८ ६:२०
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। किड्नी खराब हुनभन्दा पहिला शरीरले दिन्छ यी ३ संकेत, वेवास्ता नगर्नुहोस! मृगौला स्वस्थ रहनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि मृगौलाले हाम्रो शरीरमा उपस्थित सबै फोहोर हटाउने काम गर्दछ, यसैले आज हामी तपाईलाई केहि मिर्गौला फेल हुनु भन्दा पहिले शरीरमा कस्ता लक्षणहरू देखा पर्न सक्छ भनेर बताउन जाँदैछौं।
सुन्निनु: किड्नी खराब भएमा शरीरमा जमेको पानी र नुन निक्लिन पाउँदैन, जसले गर्दा शरीर सुन्निन थाल्छ । यस्तो अवस्थालाई इडिमा भनिन्छ । रक्तअल्पता तथा कमजोरी: मृगौला खराब भई रगतमा अक्सिजनको सञ्चार राम्ररी हुन पाउँदैन, जसले गर्दा रक्तअल्पता र कमजोरी जस्ता समस्या देखिन थाल्छ । छाला रोग: किड्नी खराबले शरीरबाट टोक्सिन्सस (बिषाक्त) बाहिर जान पाउँदैन र छालासम्बन्धि रोग उछ्रिन थाल्छ।
मिर्गौला वरिपरि दुखाइ: यदि एक व्यक्तिले मिर्गौला वरिपरि पीडा महसुस गर्दछ भने, यो मिर्गौलामा जम्मा हुने फोहोरको संकेत हुन सक्छ किनकि जब शरीरबाट फोहोर बाहिर निस्कन्दैन, तब सबै फोहोर मिर्गौला नजिकै जम्मा हुन्छन्। जसको कारण, मिर्गौला नजिक अचानक दुखाई हुन शुरू हुन्छ। मुख गनाउँने: यदि किड्नीमा समस्या छ भने रगतमा युरिनको मात्रा बढ्छ, जसले गर्दा मुख गनाउँछ। रक्तचाप बढ्नु: मृगौला खराब छ भन्ने कुरा रगतको चापबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ । रगतमा पानी र नुनको मात्रा बढ्नाले रगतको चाप बढेर जान्छ, जसलाई हामी किड्नी खराब भएको संकेत भनेर बुझ्न पर्छ।
वान्ता होला जस्तो महसुश: किड्नी खराब भएका कारण शरीरबाट बिकार बाहिर जान पाउँदैन, जसले गर्दा तपाईलाई सधै रिंगटा लागेजस्तो र वान्ता होला जस्तो महसुस भइरहन्छ। जोर्नी दुख्ने: सबैभन्दा साधारण लक्षण जोर्नी दुख्नु हो । यदि किड्नी खराब भएको छ भने माथिदेखि तलसम्मका जोर्नी दुख्ने हुन्छ। खुट्टा अचानक सुनिनु: कहिलेकाहीं मृगौला खराब हुनु भन्दा अघि खुट्टा अचानक सुनिन आउँछ किनभने जब मिर्गौलाले फोहोर जमाउँछ, मिर्गौलाले राम्रोसँग काम गर्दैन र रगत प्रवाह सुस्त र ढिलो हुन्छ। खुट्टामा रगतको प्रवाह असाध्यै तेज भएको कारण खुट्टा सुनिन आउँछ।
सुन्निनु: किड्नी खराब भएमा शरीरमा जमेको पानी र नुन निक्लिन पाउँदैन, जसले गर्दा शरीर सुन्निन थाल्छ । यस्तो अवस्थालाई इडिमा भनिन्छ ।पिसाबमा रगत देखिनु: पिसाबमा रगत देखिएमा किड्नी खराब भएको हुन सक्छ । यस्तो देखिएमा सकेसम्म चाँडो चिकित्सक कहाँ गइहाल्नुपर्छ । रक्तअल्पता तथा कमजोरी: मृगौला खराब भई रगतमा अक्सिजनको सञ्चार राम्ररी हुन पाउँदैन, जसले गर्दा रक्तअल्पता र कमजोरी जस्ता समस्या देखिन थाल्छ ।
छाला रोग: किड्नी खराबले शरीरबाट टोक्सिन्सस (बिषाक्त) बाहिर जान पाउँदैन र छालासम्बन्धि रोग उछ्रिन थाल्छ । शरीरमा एलर्जी: जब मिर्गौलाले राम्रोसँग काम गर्न असमर्थ हुन्छ भने शरीरमा धेरै फोहोर जमाउँछ। जसको कारणले शरीरमा कुनै पनि चीजको कारणले एलर्जी हुन थाल्छ किनभने जब मिर्गौलाले ठीकसँग काम गर्न सक्दैन तब शरीरमा भएको फोहोर रगत यसमा मिसिन्छ, जुन सम्पूर्ण शरीरमा फैलिदै जान्छ।